Siyaasiintii maanta ka hadashay Caleema-Saarka Axmed Madoobe, Maxay midow ku ahaayeen?
KISMAAYO(P-TIMES) – Madaxdii ugu badneyd ayaa madasha KIsmaayo iskugu tagtay, waxayna ahayd madal si dhameystiran ay dhinacyo badan u riteen hadaladooda siyaasadeed, kuwaas oo ay ku cabirayeen dareenkooda ku wajahan hoggaaminta madaxda dawladda Faderaalka Soomaaliya.
Si siman cid kasta oo hadashay waxay eedeysay Madaxweynaha Soomaaliya Max’ed Cabdullaahi Farmaajo iyo geedi socodka siyaasadiisa, oo ay sheegeen in ay tahay mid aan u hiilineyn dawladnimada Soomaaliya.
Waxay wadajir u soo wada qaadeen halkii ay Soomaaliya ka timi, maalin kasta meesha ay soo joogtay, waxayna aad ugu amaaneen madaxdii hore mid kasta doorka uu ku lahaa dawladnimada Soomaaliya.
Waxay muujiyeen si wadar ah walaacooda ku wajahan siyaasaddu xiligan meesha ay ku socoto, waxay sheegeen in dhabaha la hayaa uu yahay mid aan sharciyad ku fadhiyin, waxay ku eedeeyeen madaxda dawladda Soomaaliya in ay talada kaligood qol hosta ga xirteen.
Waxay ka digeen si siman mudo kororsi ay sheegeen in cidii ku fakartaa ay tahay mid aan dan ka laheyn Soomaaliya, waxay sheegeen in aysan marnaba 15 bilood ka dib dawladdu maalin ku darsan doonin.
Doorashadii Jubbaland oo ay Caleema-saarka Axmed Madoobe joogeen wey hambalyeeyeen, waxay sheegeen in ay ku dhacday sifo sharci ah, qaarkood waxay soo qaadeen mucaaradyada kusugan magaalada oo ay sheegeen in ay dadaal xoog badan ugu jiraan sidii ay iskugu keeni lahaayeen.
Waxay ka sinaayeen digniinta iyo walaaca ay ka qabaan mustaqbalka dalka iyo doorashada soo socota, xili doorashada ay caleema-saarkeeda ka qeybgalayeen ay jireen dad badan oo dhaliilsan, haddana waxay sheegayaan in ay waajib tahay in ay dawladdu ilaaliso waqtigeeda iyo hanaanka doorashooyinka oo ay tahay in laga heshiiyo.
Shariif Sheekh Axmed iyo Xassan SHeekh Maxamuud waxay si cad u sheegen in ka hor dhamaadka sannadkan ay tahay in heshiis laga gaaro nooca doorashada iyo sida ay noqonayso, haddii kalena ay tahay talaabo ay tahay in ay ka tashadaan ummadda Soomaaliyeed.